बजार दोहोरो अंकले बढ्दा किन सुस्तायो कारोबार ?
बोनस सेयरका लागि दुई कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कसको कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस सेयरका लागि दुई कम्पनीको सेयरमूल्य आज शुक्रबार समायोजन गरेको छ। नेप्सेले नेपाल इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल (एलआईसी) र नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार एलआईसी प्रतिकित्ता २ हजार ५०५ रुपैयाँ र नेरुडे लघुवित्तको १ हजार ३६४...
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आज बोनस सेयरका लागि फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले यो लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता २ हजार ६७८ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघि फरवार्डको अन्तिम कारोबार मूल्य प्रतिकित्ता ३ हजार ३४८ रुपैयाँ रहेको थियो। अब...
स्वाभिमान लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, अब कतिमा खुल्छ कारोबार ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आज बोनस सेयरका लागि स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेका छ। नेप्सेले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित २० प्रतिशत बोनस सेयरका लागि स्वाभिमान लघुवित्त सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता २ हजार ३३३ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघि यो लघुवित्तको अन्तिम कारोबार...
सिभिल बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि आज सिभिल बैंक लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले सिभिल बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता २१५ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघि यो बैंकको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता २३२ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित �...
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बोनस सेयरका लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य बुधबार समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ३१ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि नेपाल लाइफको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार यो कम्पनीको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता २ हजार १९२ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि यसको अन्तिम...
गरिमा विकास बैंकसहित तीन कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कसको कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आज सोमबार गरिमा विकास बैंकसहित तीन कम्पनीका सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको बोनस सेयरका लागि गरिमा विकास बैंक, सेन्ट्रल फाइनान्स र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन भएको छ। समायोजनपछि प्रतिकित्ता गरिमाको ३२४ रुपैयाँ,...
इन्फिनिटी लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य शुक्रबार समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले इन्फिनिटी लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रस्ताव गरेको १४.७५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार यो...
नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बोनस सेयरका लागि नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य शुक्रबार समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेसनल लाइफको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता १ हजार ६४ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको...
नारायणी र ज्योति विकास बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, अब कतिमा खुल्छ कारोबार ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र ज्योति विकास बैंकको सेयरमूल्य बुधबार समायोजन गरेको छ। नेप्सेले हकप्रदका लागि नारायणीको र बोनस सेयरका लागि ज्योतिको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार अब नारायणीको प्रतिकित्ता ४६५ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि यो बैंकको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार...
सिद्धार्थ बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको मंगलबार सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले १२ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि सिद्धार्थ बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार अब यो बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ४२१ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार...
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि बुधबार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले १३ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ४७८ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो बैंकको प्रतिकित्ता सेयर...
एनसीसी बैंक र गुहेश्वरी मर्चेन्टको सेयरमूल्य समायोजन, अब प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि एनसीसी बैंक र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य मंगलबार समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता एनसीसी बैंकको ३२४ रुपैयाँ र गुहेश्वरी मर्चेन्टको १९३ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार...
प्राइम बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, अब कतिमा खुल्छ कारोबार ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि सोमबार प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले १५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि यो बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार अब प्राइम बैंकको प्रतिकित्ता ४०७ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता...
आईसीएफसी फाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि आइतबार आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले १०.५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि आईसीएफसी फाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार अब यो कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर २६२ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि अन्तिम कारोबार...
बुटवल पावर र छ्याङ्दीको सेयरमूल्य समायोजन
काठमाण्डौ । बोनस सेयरका लागि दुई जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बुटवल पावर र छ्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजनअनुसार बुटवल पावरको १० प्रतिशत बोनसका लागि प्रतिकित्ता ४०५ रुपैयाँ र छ्याङ्दीको ५ प्रतिशतका लागि १५५ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि यी दुवैको...